Rant: Iphasiwedi yeConundrum kunye namava oMsebenzisi | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-9 kaDisemba ngo-2014 NgoLwesibini, Meyi 2, 2017 Douglas Karr
Mhlawumbi esona sigqibo silungileyo endisenzileyo kulo nyaka kwimveliso yam kunye nokhuseleko bendisayinela Dashlane. Andigcini onke amagama am okugqitha epasile, i-desktop kunye newebhu ngenkqubo ekhuselekileyo, ebhaliweyo. Inyani yile, andazi nokuba yeyiphi iiphasiwedi zam kwakhona kuba ndisebenzisa Dashlane Iplagi ye-Chrome yokungena ngewebhu, uguqulelo lweDesktop yeeapps, kunye neeFowuni zeFowuni yokungena kweApple.
UDashlane uneempawu ezimbalwa ezongezelelekileyo endizithandayo. Okokuqala, ndingabelana ngamagama agqithisiweyo nabasebenzisi abagunyazisiweyo- enkulu kumphathi weofisi yam, umgcini zincwadi, umphathi weprojekthi kunye nabaphuhlisi. Ndingabanikeza ukufikelela okupheleleyo ukubona iphasiwedi okanye amalungelo asikelwe umda wokuyisebenzisa ngokulula. Kwaye banikezela ngonxibelelwano olungxamisekileyo endinokuthi ndilusete. Ukuba, nangasiphi na isizathu, andikwazi ukunika umntu imvume kuluhlu lwam olungxamisekileyo- banokucela ukufikelela. Ukuba andiphenduli ngexesha elithile, bayafikelela kwi Dashlane akhawunti.
Kuba ndiyisebenzisa kwizixhobo, iinethiwekhi, kunye namaqonga- ndiyathanda ukuba nendawo enye yokugcina yonke into engenayo kunye nomkhondo ophicothiweyo. Dashlane ikwandixelela ukuba ngawaphi amagama agqithisiweyo antsonkothileyo ngokwaneleyo kwaye endibeka emngciphekweni. Ngoku ndinee-passwords ezizodwa, ezomeleleyo ezahlukileyo kwinkqubo nganye endingena kuyo. Ke ukuba umntu ufumana enye yeephasiwedi zam, abafikeleli kuyo yonke inkonzo. Kwaye ukuba bazama ukungena kwiDashlane, kuya kufuneka ndigunyazise zonke izixhobo ezizama ukungena ngemvume.
Oku kundizisa kwingxaki yam ngamaphasiwedi. Dashlane ibenze lula ubomi bam kalishumi kodwa ezinye izicelo zibenza nzima ubomi bam kalishumi. Ndigula kakhulu kukungena iphasiwedi yonke imizuzwana emi-2 ngeqonga elinye. Hlaziya usetyenziso… kufuneka ungene ngemvume. Khuphela ingoma… kufuneka ufake ipassword yakho. Guqula useto lolawulo… kufuneka ufake ipassword yakho. Oku ngaphandle kwento yokuba Sele ndingene kwiseshoni enye!
Sukucela abantu ukuba benze igama eliyinkimbinkimbi, elinzima nelingaqondakali kwiscreen esinye… kwaye uqhubeke ubacela ukuba bangenise igama eligqithisiweyo kwisenzo ngasinye emva kwamava omsebenzisi! Ngeenkqubo ezinje ngeDashlane, andisazi ngentloko iphasiwedi zam, ndiyazikopa kwaye ndizincamathisele. Oku kuthetha ukuba kufuneka ndingene kwi-Dashlane, ndikope iphasiwedi, ndivule usetyenziso, ndingenise igama eligqithisiweyo, emva koko ndihlale ndilincamathisela kwisicelo ngasinye emva koko.
Ndiyayithanda into yokuba ezinye iiapps ezihambayo zihamba ziye kwiikhowudi ezinemivo emi-4 okanye ukuswayipha ngokulandelelana kunokuba zindingenise lonke igama elinegama elinegama eligqithisiweyo elineminqwazi, amanani, iisimboli, njl. ukungqinisisa nezinye ii -apps (wonke umntu kufuneka abe nale!).
Nika abantu abanegama eligqithisiweyo elikhuselekileyo ukhetho olulula lokuqhubela phambili ngeqonga. Andikhathali kuphelelwa lixesha kwaye ndifuna iphasiwedi kwakhona, kodwa xa ndikwisicelo, kuyahlekisa.
Ukubhengezwa: Ukuba ubhalisela i Dashlane akhawunti kunye Dashlane Ikhonkco elingasentla, ndifumana iinyanga ezi-6 ze Dashlane Intlawulo!
tags: dashlaneinombolo yokuvulaamava